Budata Video to GIF maka Windows
Budata Video to GIF
Free Budata maka Windows (5.71 MB)
Budata Video to GIF,
Vidiyo na GIF bụ mmemme dị irè ma na-aga nke ọma nke na-enye gị ohere ịtụgharị vidiyo ọkacha mmasị gị na GIF, ekele maka interface ya dị mfe na nke enyi. Usoro ihe omume nwere ike tọghata fọrọ nke nta niile na-ewu ewu video formats na GIF. Ndị a formats gụnyere AVI, MPEG, MP4, WMV, MKV, MOV, VOB, RMVB, wdg Agụnyere usoro vidiyo ama ama.
Tọghata vidiyo ọkacha mmasị gị ọ bụghị naanị GIF, kamakwa JPG, BMP, TGA, PNG, TIF wdg. Video ka GIF, nke nwekwara ike tọghata oyiyi formats, rụrụ niile akakabarede Filiks ngwa ngwa na na elu àgwà. Na mgbakwunye, mmemme ahụ na-enye gị ohere ilele animation nke vidiyo mbụ gị ngwa ngwa.
Ị nwere ike ịmepụta GIF nwere okpokolo agba 24 kwa nkeji site na mmemme na-enye gị ohere ịkpọ vidiyo vidiyo gị dị ka GIF. Ị nwere ike belata uru a dịka mmasị gị na mkpa gị si dị. Ị nwere ike na-ebipụta GIF ị kwadebere na Video ka GIF omume, nke na-adịghị mkpa ọ bụla ọzọ nkwụnye ma ọ bụ mmemme maka ntughari usoro na gị na ebe nrụọrụ weebụ.
A na-agbakwunye akara mmiri na GIF ndị ị mepụtara na ụdị nnwale, nke ị nwere ike ibudata ma jiri nefu. Ọ bụrụ na-amasị gị iji ụdị ikpe, ị nwere ike ịzụta ụdị mmemme ahụ maka $19.95.
Video to GIF Ụdịdị
Nha faịlụ: 5.71 MB
Pixlr bụ ngwanrọ na-edezi foto nke na-enye gị ohere ịmepụta foto ndị mara mma dị ka mmasị gị si dị...
NX Studio bụ mmemme zuru ezu ezubere iji lelee, hazie ma dezie foto na vidiyo ejiri igwefoto...
KMPlayer bụ ike na free media player na elu atụmatụ mere maka kọmputa ọrụ were were kpọọ nile di...
MyPaint bụ onye editọ ihe osise dị elu maka ndị na-ese foto dijitalụ. Onye nchịkọta akụkọ ahụ, nke...
Ewepụla mmemme ịchọrọ ibudata makana o nwere virus. Ọ bụrụ nịchọrọ inyocha ụzọ ndị ọzọ, ịnwere ike...
myTube bụ ngwa Windows 8.1 na -arụ ọrụ nke ọma ebe ị nwere ike lelee vidiyo YouTube na -emepeghị...
Dị ka aha na-egosi, Easy Video cutter bụ a video nchịkọta akụkọ na i nwere ike iji bee video faịlụ....
iMyFone MarkGo bụ mmemme mwepụ na akara mmiri maka ndị ọrụ Windows PC. Ọ na -enye ụzọ kachasị mfe...
Adobe Photoshop Express, ụdị efu nke sọftụwia Adobe Photoshop na -ewu ewu, bụ ụzọ kachasị mfe,...
PicsArt bụ ngwa edezi foto nefu nwere ngwa edezi foto yana ngwa ọkachamara dị ka imepụta mkpokọta...
Vidiyo na GIF bụ mmemme dị irè ma na-aga nke ọma nke na-enye gị ohere ịtụgharị vidiyo ọkacha mmasị...
Mkpuchi bụ ụdị ihe ọchị na onye na-agụ akwụkwọ e-book. Site na Ụlọ Ahịa Windows, ị nwere ike...